Wararkii ugu danbeeyey Somaliya, waa shir noocee ah shirka lagu wado inuu ka dhaco Mogdisho?
Posted by admin on May 28 2011 13:26:12
Somalia:(HS)-Maxaad kala socotaa ujeedada shirka lagu wado inuu ka dhaco Mogdisho oo ay iclaamisay dowlada, Doorashadii hogaanka sare iyo qaabka ay u dhaceyso, Shacabka koofurta Somaliya oo walito ka soo kabsan la dhibaatadii ay u geysteen abaaraha kedib markii, Somaliland iyo siyaasadeeda arimaha dibada iyo sida aduunyadu ula dhaqmi doonto waxii hada keidb ka danbeeya.warbixin
Mogdisho:- Madaxweynaha Somaliya Shiikh Shariif iyo wasiirkiisa 1aad oo markii ay ka baaqsadeen iney ka qeyb galaan shirkii bartamahii bishii April lagu qabtay dalkaasi Kenya oo xiligaasi waxoogaa shacbiyad ah ku helay waxaa ugu danbeyn leysla saaray hal diyaarad shirkii dhawaantan ka dhacay Kenya ee ay hogaanka u heysay QM.
Hadaba bal aanu dulmar ku sameyno ujeedadii shirkaas iyo waliba meesha ay maanta wax marayaan. shirku waxuu ahaa shir ay soo qaban qaabisay QM laguna xoojinayey qodobadii ka soo baxay shirkii Kenya ka dhacay iyo dhiiragalinta shir ay madaxda dowlada codsadeen iney ku qaban doonaan magaalada Mogdishu kaasi oo ay R/wasaare Farmaajo iyo madaxweyne Shariif ugu magac dareen shirka wadatashiga.
Hadaba xaqiiqda shirkaasi ayaan dooneynaa in aanu waadax uga dhigno shacabka Somaliyeed si ay u dareemaan magaca uu wato iyo cida lagu heshiisiin doono halka ay ka imaan doonaan ma dalka oo dhan, ma Magaalada Mogdisho oo kaliya. Yaa hogaanka shirka hagaya ma Soomaali mise QM?
Shirku maahan shir dib u heshiisiineed amaba mid Somali leys kugu keenayo waayo maba jirto meel xukumada Farmaajo laga taageersan yahay hadey noqon laheyd maamul goboleedyada degaanadoodu xasiloon yahay amaba gobolada dalka inteeda kale oo shacabkaasi mar hore ayey kala tageen. waxey ka talin jireen 4KM laakinse hada waxoogaa xarakaad ah oo leyskaka yareeynayo culeysyada siyaasadeed ee beesha caalamka ka heysta TGFda ayey sameeyeen oo waxey 4KM ka dhigeen 5KM oo ay ka taliyaan magaalada Mogdisho ee baaxadaas leh.
Yaashirka hogaanka u haya?
Shirka inkasta oo uu madaxweynaha Somaliya si deg deg ah uga soo baxay Kenya hadane waxaa hogaaminaya wakiilka QM waayo maadama aysanba hogaanka dalka ugu sareeya aysan isku keeni karin oo ay shacabka intiise kale dayaceen oo ay horey u kasban waayeen waxaa shirka hogaankiisa iska leh QM. waxaana inta uusan wakiilka u dhoofin Mogdisho laga doonayaa iney aduunyada tusiyaan dadka ay doonayaan iney heshiisiiyaan oo ay shirka ku codsadeen meesha ay ku fashilmi doonaan Madaxweynaha iyo Farmaajo waa meeshaas, inaksta oo ay qorsheynayaan odoyaal ay Mogdisho ka xuleen iney iskugu keenan goobta shirka.
Doorashada iyo qaabka ay u dhaceyso.
Doorashada waxey dhaceysaa xiligii la rabay walow ay Farmaajo iyo madaxweyne Shariif laga soo xigtay iney doonayaan iney wadanka doorasho ka dhacdo laakinse ay iyagu doonayaan in iyaga iyo gudoomiyaha barlamaanka Somaliya hal mar isla dhacaan.marka warsuuqa iyo sida ay Somalidu arimaha qaar u dhigaan laga soo tago doorashadii waxey dhaceysaa bisha 8aad ka hor aduunyaduna waxey ku sameyneysaa Somaliya faragalin dhinackasta leh, waxeyna ka dhaceysaa meel aan Mogdisho aheyn waxeyna u badan tahaya Kenya iney ka dhacdo si loo hubiyo nabadgalyada musharaxiinta u taagan xilkaan.hogaamiyaha doorashadaas ku guuleysta looguma yeeri doono dowladiisa kumeel gaar waxuuna noqon doonaa madaxweyne rasmi ah.
QM oo hada la daalaan dhaceysa sidii ay Somaliweyn iskugu keeni laheyd waxey ka tigtoon tahay ineysan doorashadu ka dib dhicin waqtigeeda hadii ay taasi dhacdana wey ogyahiin in ay Puntland gooyni isku taageyso oo ay Somaliweyn sii kala tagi doonaan sidaasi daraadeed waqtigii dowlada hada jirto waxuu ku egyahayay 22 bisha 8aad oo lagu wado inuu dalka la wareego hogaan cusub.
Somaliland iyo siyaasada cusub ee aduunyada ka socda.
Siyaasadaha cusub ee hada ka jira aduunka waxaa siweyn ugu faa'ideysanaya Somaliland oo iyadu hada siyaasadeeda arimaha dibada wax badan uga qabsoomeen markaad u guurkasho guuxa QM iyo wadamada daneeya arimaha Somaliya iyadoo Somaliland lagu aqoonsanayo qaabkii loo aqoonsaday wadanka ugu yar dunida ee Eastmor oo intii aan la aqoonsan horta lagu casuumi jiray shirarka calamka oo ay ka qeyb galeyso dowlada Indunisia kedibna laga saaciday dhinaca mashaariicda kedibna sidaasi xornimo ku heleen.
Somaliland waa la mid, waxey hada xooga saareen arimaha dibada waxeyna safka hore ka fadhiyaan madaxdoodu amaba goob joog ka yahiin meelaha siyaasada Somaliya lagu kar kariyo si toos ah iyo si dadbanba. isku soo baxii dhawaantan ay isku soo baxeen shacabka Somaliland waxuu beesha caalamka oo ku jahwareertay qilaafka masuuliyiinta TGFda waxey hal mar isha ku dhufteen hanaanka iyo nabada ka jirta Somaliland iyadoo hada laga saacidayo dhinaca mashaariicda oo runtii bilaaw fiican oo siyaasadeed u ah hadafka iyo rajada ay shacabkaasi ka qabaan iney maalin uun helaan madaxbanaani. mid ka mid ah masuuliyiinta QM oo aan magaciisa la shaacin ayaa laga soo xigtay isagoo leh maxey aduunyadu dowlad 4KM joogta u siineysaa dhaqaalaha oo indhaha looga qabsanayaa meelaha ay nabadu ka jirto sida Somaliland iyo Puntland.dad badan oo indheer garad Somaliyeed ah ayaa sheegayo hadii mar hore ay xukumadii Riyaale ay siyaasadeeda arimaha dibada oo aan dhaafsiisneyn dowlada Ethiopia oo ay saaxibo la aheyd oo kaliya ay sidan u fur furi laheyd mar hore ayaa la ceebeeyn karay madaxda Somalida ee maalinkasta qilaafka ku jira.
Hadaan shacabka Somaliyeed u soo koobno siyaasadaha ugu cad cad maanta waa in qilaafka hogaanka sare uu magaca Somaliyeed meel xun gaarsiiyey waxaana xafiisyada waaweyn ee beesha caalamka marka arimaha Somaliya laga hadlayo loogu yeeraa Madaxweyne Shariif, Farmaajo iyo Afhayeenka baarlamaanka ma heshiiyeen 3dii la mooday in leysla qabo hadii ereyada loo isticmaalo masuuliyiintaas shacabka si waadax ah loogu turjumo ma heyno micno kale oo kaasi dhaama oo shacab muslim ah loo soo bandhigi lahaa, waayo ereyada mararka qaazrkood masuuliyiintaas loo isticmaalo xitaa damiirka caruurtooda uma roona inasta oo shaki badan la galiyey ineyba kala jecel yahiin iyo in kale waayo dad la leeyahay wadankiinu haka baxo kumeel gaarka ee idinku heshiiya maxaad ku diideysaa in ereyadaan iyo kuwa ka xun loo adeegsado.
Guusha Somaliland iyo Puntland
Somalilnd ma muuqato qaab danbe oo mashaarciida horumarinta looga hor istaagi karo qodob aysan aduunyadu aqoon meel ay u dhaafto ayey ku doodayaan waxeyna leeyahiin na tusiya hogaamiye Somaliyeed oo aanu hor fadhiisan karno kedibna aduunyadii waxey arkayan rag 4KM ka taliya hadane magacii guud ee Somaliya ku magacaaban oo waliba sidaasi ay tahay is qilaafsan.
Puntland iyo inta badan shacabka Somaliyeed waxey taagan yahiin waa in ay doorasho ka dhacdo Somaliya hadii kale ninkasta geedkii uu kori karo amaba dadnimadii uu dadkiisa iyo degaankiisa ku bad baadsan karo haku dhaqaaqo mana u muuqato iney shirka Mogdisho ka soo qeyb gali doonaan ilaa ay aduunyada tusiyaan iney qilaafkii ka heshiiyeen hogaanka sare. waxaa kale oo iyaduna xusid mudan shirka lagu wado inuu Mogdisho ka dhaco waxaa loogu magac daray shir wadatashi hadaba masuuliyiintiiba heshiis maahane yaa lala tashanayaa, mase inta dad leysku keeno ayaa la doonayaa in la sawirto?
Wararkii ugu danbeyey dhinaca nolosha shacbaka koofurta Somaliya.
Inkasta oo ay dalka oo dhami ka da'een roobab lagu diirsaday hadane degaano ay ka mid yahiin Hiiraan iyo nawaaxigeeda dadku walito kama soo kabmin dhibaatadii ay u geeysteen abaarahii dhawaantan ka dhacay guud ahaa Somaliya oo galaaftay kumanaan dad iyo duunyaba leh. dadka qarkood duunyadii ay dhaqan jireen wey ka dhamaatay mana hayaan camal iyo nolol kale maadama xoolahii ay ku tiirsanaayeen ay ka dhamaadeen. hadii aan dadkaasi loo maciinin waxey u badan tahay iney la soo deristo nolosha ay hada ku jiraan qoysas badan mid ka liitada heerka ay hada joogto.
Isku soo duuboo Somaliya waxaa ka curan doona hanaan dowladeed oo dhaama midka hada jira ee isku mashquulsan iyadoo ay shacabkii dabar go'ayaana qilaaf ka dhamaan waayey.